Somaliland: “Aniga Marnaba Suurto-gal Igama Aha In Wax Aflegaado & Xumaan U Eeg Aan Ku Idhaahdo Dadka Ugu Sharafta Badan Somaliland” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Aniga Marnaba Suurto-gal Igama Aha In Wax Aflegaado & Xumaan U...
Wasiirka Horumarinta Maalliyada Oo Fasiray Hadal Uu HoreU Yidhi Oo Uu Sheegay In La Marin Habaabiyey Macnihiisa
“Arrinkaasina Wuxuu Ahaa War Ka Dhashay Cajalad Laysku Kab-Kabay Oo Inba Meel Laga Soo Gooyay, Kaasi Oo Loola Jeeday……..Dadka Ku Dhaqan Laascaannood Iyo Buuhoodle Waa Dad taariikh ku suntan ilaalinta diinta.” ”
Wasiirka Wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Mud. Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa ka hadalay hadalo ay muddooyinkii dambe qorayeen qaar kamid ah warbaahinta isla markaasina lagu faafiyay baraha ay bulshadu ku kulanto, hadalkaasi oo lagu sheegay in wasiirku maaliyaddu uu aflagaadeeyay bulshada ku dhaqan gobolka Sool. Wasiir Yuusuf oo shalay warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa, waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaasi, waxaana isaga oo ka hadlayay uuyidhi; “Arrinkaasi waxa uu ahaa war been ah oo aanay waxba ka jirin, oo ka dhashay cajalad layku kabkabay oo inba meel laga soo gooyay, taasi oo meelo kala duwa iyo odhaaho kala duwan loola jeeday. Anigu ka qof ahaan inaba suuragal maaha dadka ugu sharafta badan leh Somaliland ee ku nool deegaannada Buuhoodle iyo Laascaanood iyo dhammaan dadka Somaliland gudo iyo dibedba, inaan wax aflegado ah ama xumaan u eeg aan ku idhaahdo. Waad dadka aan ugu jecelahay, waa dadka ugu mudan ilaalinta dhaqanka, wanaag iyo samo saaxiib u ah, isla markaana taariikh leh ku suntan ilaalinta diinta.” Ayuu yidhi wasiir Yuusuf. Waxaanu intaasi ku daray, “Hadalkaygu waxa uu saabsanaa goobo kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan ku socday oo ka kaladhacay gobollada Saaxil iyo Tog-dheer, isla markaana aan la hadlaayay qaar shaqaalaha wasaaradda maaliyadda, oo aan lahaa qofka shaqaalaha ah waxa ku waajib ah inuu ilaaliyo hantida ummada ilaaliyo isaguna iska ilaaliyo, inuu diin yeesho, dhaqan wanaagsan oo suuban uu yeesho, akhlaaqna uu yeesho. Marna waxaan ka hadlaayay bacahii kootarabaanka ahaa ee aanu gubaynay, hadaladaas aan meelaha kal duwan ka sheegay ayaa layku keenay, Kootarabaan kuna dalka meel kasta wuu kasoo galaa oo dad kala duwan ayaa dalka soo galiya, mid walba halkii lagu qabto ayuun baa lagu qabtaa, wuxuu doonaba ha noqdee, gobol gaar u ah inuu kootarabaan iyo xumaan ka shaqeeyaa ma jiro, arrintu iyo ujeedadu horta sidaas bay ahayd, sidii si aan ahayn baa loo duway, qofkastaana wuu arkayaaoo garanayaa.” Ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray.
Somaliland: Kulmiye Tartanka Iyo Doorashada Maanta Waa U Diyaar Dabadana Am Hayno Waxaanu Diyaar … Maxamuud Xaashi